Malagasy to Hebreo to Malagasy Translator | Hebreo-Dikanteny sy Diksionera an-tserasera Malagasy - Lingvanex.
Malagasy mankany Hebreo
Ampiasao ny fampiharana fandikan-teny Lingvanex isaky ny dikanteny maimaim-poana avy amin'ny teny malagasy mankany amin'ny Hebreo. Mampihatra ny teknolojia fandikan-teny amin'ny milina sy ny faharanitan-tsaina artifisialy izahay ho an'ny mpandika teny malagasy Hebreo maimaim-poana.
Handika amin'ny teny malagasy amin'ny Hebreo an-tserasera
Mila mandika mailaka avy amin'ny mpamatsy amin'ny teny Hebreo na tranonkala iray ho an'ny fialan-tsasatrao any ivelany? Lingvanex dia manolotra fandaharana sy fampiharana izay mandika avy hatrany avy amin'ny teny malagasy ho amin'ny Hebreo!
Mila dikanteny Hebreo? Andao hatao!
Ny serivisy maimaim-poana Lingvanex dia mandika avy hatrany ny teny, andian-teny ho feo, rakitra audio, podcast, antontan-taratasy ary pejy web avy amin'ny Hebreo ho amin'ny teny malagasy ary avy amin'ny teny malagasy ho amin'ny Hebreo.
Ny fampiharana fandikan-teny Lingvanex dia hanampy anao amin'ny fotoana rehetra! Ny fampiharanay miasa amin'ny fitaovana isan-karazany – android, iOS, MacBook, mpanampy marani-tsaina avy amin'ny Google, Amazon Alexa, ary Microsoft Cortana, smartwatches, navigateur rehetra – dia hanampy amin'ny fandikana avy amin'ny teny malagasy ho amin'ny Hebreo na aiza na aiza! Mora sy maimaim-poana izany! Lingvanex koa dia manome dikanteny an-tserasera avy amin'ny Hebreo ho amin'ny teny malagasy.
Ny dikanteny malagasy amin'ny Hebreo avy amin'ny logiciel fandikan-teny Lingvanex dia hanampy anao hahazo dikanteny feno amin'ny teny, andian-teny ary lahatsoratra avy amin'ny teny malagasy mankany amin'ny Hebreo ary fiteny 110 mahery.
Mampiasà fampiharana Lingvanex handikana haingana sy haingana ny lahatsoratra malagasy Hebreo maimaim-poana. Lingvanex dia manome safidy azo idirana amin'ny serivisy fandikan-teny Google avy amin'ny teny malagasy mankany amin'ny Hebreo ary avy amin'ny Hebreo amin'ny teny malagasy.
Ahoana no fiasan'ny fandikana lahatsoratra amin'ny teny Malagasy To Hebreo?
Ny serivisy fandikan-teny dia mampiasa motera milina mpandika teny Lingvanex handikana ny lahatsoratra nosoratanao tamin'ny teny malagasy. Isaky ny manoratra teny, andian-teny na fehezanteny amin'ny teny malagasy ianao – mandefa fangatahana API amin'ny motera Lingvanex izahay mba handikana. Ho setrin'izany dia mandefa valiny miaraka amin'ny lahatsoratra voadika amin'ny teny Hebreo izy ireo. Lingvanex dia mampiasa teknolojia avo lenta toy ny faharanitan-tsaina artifisialy (fianarana lalina), data lehibe, API amin'ny tranonkala, informatika rahona, sns. Azonao atao ny manamarina ny kalitaon'ny dikanteny avy amin'ny teny malagasy mankany amin'ny Hebreo amin'izao fotoana izao.
Tsia. Tsy afaka misintona azy ianao. Amin'izao fotoana izao dia tsy azonao ampiasaina afa-tsy ny dikanteny Hebreo an-tserasera eto amin'ity pejy ity. Na izany aza, azonao atao ny mametraka ny fitaovana fanitarana chrome antsoina hoe Lingvanex - Mpandika teny sy Diksionera Chrome Extension. Na ampiasao ny rindranasa fandikan-teny - ny rohy mankany amin'ireo fampiharana ireo dia ao amin'ny pejy. Raha vao tafapetraka ity fitaovana fandikan-teny ity dia azonao atao ny manasongadina sy manindry havanana amin'ny fizarana lahatsoratra ary manindry ny kisary “Dikanteny” handikana. Amin'izany fomba izany no ahafahanao mandika tsy avy amin'ny teny malagasy amin'ny Hebreo ihany, fa eo amin'ireo fiteny 36 tohanan'ny fampiharana ihany koa. Azonao atao ihany koa ny mandika ny pejin-tranonkala avy amin'ny teny malagasy ho amin'ny Hebreo amin'ny fipihana ny kisary “Dikanteny” eo amin'ny navigateur.
Manao ahoana ny fahamarinan'ny dikanteny avy amin'ny teny malagasy mankany amin'ny Hebreo?
Ny teknôlôjia amin'ny teny milina dia ampiasaina hanatanterahana ny fandikan-teny. Mivoatra isan'andro ny lozisialin'ny fandikan-teny ary manome fandikan-teny malagasy tena marina amin'ny Hebreo. Azonao atao ny manamarina izany amin'izao fotoana izao!